I-CANARY'S NEST... I-A/C NGOKUPHELELEYO, WIFI, POOL
I-Canary's Nest izakususa uxinzelelo lwakho.....
La magumbi okulala amathathu (3) anobunewunewu kunye namagumbi okuhlambela amabini (2) asekhaya, abekwe eDrax Hall Manor, eSt Ann's eyindawo yokuhlala ekhethekileyo enamasango anika ukhuseleko lweeyure ezingama-24...imizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya eDunn's River Falls, iDolphin's Cove. , Intaba yeMystic kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane zemveli ukuba uphonononge. Indlwane yaseCanary nayo yimizuzu engama-65 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sikaDonald Sangster eMontego Bay.
Le ndlu intle yendwendwe inamagumbi amabini (2) aneebhedi ezinkulu kunye negumbi elinye (1) elinebhedi enkulukazi. Kukho amagumbi okuhlambela amabini (2) agcweleyo, enye ikwigumbi lokulala elikhulu kwaye igumbi lokuhlambela lesibini liphakathi kwamagumbi amabini (2). Indawo yokuhlala kunye neyokutyela ineesofa ezimbini (2) kunye netafile yokutyela ehlala abantu aba-6. Onke amagumbi kunye neendawo zokuhlala zixhotyiswe ngeTV ezixhonywe ezindongeni. I-WIFI, iNetflix, ibhokisi yeTV ye-Android kunye neeyunithi zokupholisa umoya ukuze uhlale uphumle kwaye wonwabile ngelixa ungaphakathi. Kukwakho negumbi lokuhlamba impahla elinomatshini wokuhlamba kunye nesomisi. Iindwendwe zinokulungiselela ukutya kwazo nokuba kwisitovu sensimbi engenasici okanye ngokusebenzisa i-oven yetoaster. Le ndlu inayo yonke into ekufuneka yenze zonke iindwendwe ziphumle kwaye zizive zisekhaya kude nekhaya. Ibhonasi eyongeziweyo... indlu inesixokelelwano sayo sokulumkisa.
Ngaphandle kwendlu yonke, undwendwe luyakwazi ukufikelela kwidama lokuqubha, ijim, inkundla yentenetya, oojingi kunye nezilayidi zabantwana kunye nendlela yokuhamba.
Iyafumaneka ukuze uphendule yonke imibuzo yakho kunye nezinto ezikuxhalabisayo nangaliphi na ixesha.